ब्यवसायीक रूपमा चर्चित भएपनि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने नपाएका ५ फुटबलर | | Neplays.com
ब्यवसायीक रूपमा चर्चित भएपनि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने नपाएका ५ फुटबलर
By Neplays	 Last updated Jun 2, 2020
कुनैपनि फुटबलरको चाहना हुन्छ, खेलाडी बनेपछि राष्ट्रिय टिमबाट खेलेर देशको प्रतिनिधित्व गरौ । क्लव फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गरेपनि केहि यस्ता खेलाडी छन, जसले राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने मौका पाएनन् ।
क्लव स्तरमा उनीहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपनि देशबाट खेल्न नपाएका धेरै खेलाडी छन । यस्तैमा आज हामी ५ त्यस्ता खेलाडीका बारेमा कुरा गर्नेछौ, जसले क्लव स्तरमा राम्रो गरेपनि देशको क्याप जित्न सकेनन ।
१. मिकेल आर्टेटा
हाल आर्सनलका प्रशिक्षक मिकेलले क्लव स्तरमा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले आर्सनलबाट खेल्दा होस या एभर्टनबाट खेल्दा आफुलाई प्रभाणित गरेका थिए । स्पेनको यू १६ देखि १७ हुँदै यू–२१ टिमबाट खेलेका थिए । तर उनी स्पेनको एउटा संभावित मिडफिल्डर मानिएपनि राष्ट्रिय टिममा पर्न सकेनन् । उनले सन् २०१६ मा सन्यास लिए लगत्तै बार्सिलोनामा पेप ग्वार्डियोलाको सहायक प्रशिक्षकमा आबद्द भएका थिए । त्यसपछि उनी सन् २०१९ मा आर्सनलको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए ।
२. पाओलो डी कानीयो
इटलीका पाओलोले क्लवमा ११ वटा फरक क्लवबाट खेलेका थिए । जसमा उनले युभेन्ट्स, नापोली, मिलान, वेष्ट हाम जस्ता क्लवबाट गरेर कुल ५३४ खेल खेलेका थिए । जसमा उनले १२६ गोल गरेका छन । उनी क्लवमा सफल खेलाडी भएपनि राष्ट्रिय टिममा उनले स्थान बनाउन सकेनन् । इटलीको बी टिमबाट एक खेल खेलेका उनले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन नसक्नुको कारण एउटा उनको स्थानमा तिब्र प्रतिस्पर्धा र अर्को गोल गर्नसक्ने क्षमताको कमी भएको बताइएको छ ।
३. स्टिभ ब्रुस
इंग्ल्याण्डका फुटबलर स्टिभले म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट करिव नौ बर्ष खेले । जसमा उनले तीन सय नौ खेल खेले, यस्तै नोर्विच सिटी, ब्रमिङघम सिटी, सेफिल्डबाट करिव ७३७ खेल खेल खेलेका थिए । डिफेन्डर भूमीकामा खेल्ने उनले ८१ गोल गरेका छन । तर उनले इंग्ल्याण्डको राष्ट्रिय टिमबाट एक खेलपनि खेल्न पाएनन् । प्रिमियर लिग खेल्दा उनले तीन वटा लिग, तीन एफ ए कप, युरोपियन सुपर कपको उपाधि जितेका थिए ।
४. जोन माकगोभ्रेन
स्कटिक फुटबल खेलाडी जोनले सन् १९६५ देखि १९८५ सम्म ब्यवसायीक फुटबल खेले । जसमा उनले धेरै समय डर्वी काउन्टी र नोटिङघमबाट आफ्नो ब्यवसायीक करियर विताएका थिए । स्कटल्याण्ड यू–२३ टिमबाट खेलेका उनले राष्ट्रिय टिममा भने स्थान बनाउन सकेनन् । खेलाडी करियरको अन्त्यसँगै उनले प्रशिक्षकको भूमीकामा देखिएका थिए । जसमा उनले पाँच वटा क्लवमा काम गरे । जुन त्यति चर्चामा छैनन् ।
५. कार्लो चुदिसीनी
इटालीमा रहेको उत्कृष्ट गोलकिपरको सूचीमा पर्ने कार्लोको दुर्भाग्य, उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खेल्दा बुफोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । जसका कारण उनले क्लव स्तरमा राम्रो गरेपनि राष्ट्रिय टिममा भने कहिले स्थान बनाउन सकेनन् । उनी जहिलपनि रिर्जभ गोलकिपरमा परे ।
चेल्सीको पूर्व गोलकिपर कार्लोले सन् २००० देखि २००९ सम्म खेले ।
त्यो बेला उनी प्रिमियर लिगको उत्कृष्ट गोलकिपर मानिन्थे । त्यसपछि उनी टोटनह्याममा तीन बर्ष खेल्दा पनि उनको चर्चा कम थिए । उनले २०१२ देखि २०१४ सम्म एल ए ग्यालेक्सिबाट खेलेपछि सन्यास लिए । उनले क्लव करियरमा कुल दुई सय ३३ खेल खेलेका थिए । कार्लोले इटालीको यू–१८ र यू–२१ टिमबाट खेलेका थिए । क्लव स्तरमा जतिपनि चर्चा कमाउपनि राष्ट्रिय टिमबाट उनले एकपटक पनि मैदानमा उत्रन पाएनन् ।